Link silsilad xayndaabka - Shiinaha Hebei Samsung Birta Wire mesh
Bowd Link silsilad waxaa sidoo kale la odhan jiray mesh silig diamond la furitaanka diamond ah. Waxaa la sameeyey oo silig ka biraha kala duwan uga texeen by mashiinka silsilad link xayndaabka. Our qalab silsilad link bowd waxaa laga heli karaa in ahama, galvanized, iyo PVC dahaarka leh silig. Waxaa caadi ahaan loo isticmaalaa in jardiinooyin, yard isboortiga, goobaha warshadaha, guryaha, waddooyinka iyo dhacdooyinka gacanta ku badnaa. Jare iyo Features: furitaanka Lebis, dusha flat, jare fudud iyo isticmaalka wax ku ool ah. Easy oo dabacsan loogu rakibo iyo xira. Tra ...
Min.Order Tirada: 100 Meter / Mitir
Supply Kartida: 80000 Meter / Mitir per Month
Chain bowd Link waxaa sidoo kale la odhan jiray mesh silig diamond la furitaanka diamond ah. Waxaa la sameeyey oo silig ka biraha kala duwan uga texeen by mashiinka silsilad link xayndaabka. Our qalab silsilad link bowd waxaa laga heli karaa in ahama, galvanized, iyo PVC dahaarka leh silig. Waxaa caadi ahaan loo isticmaalaa in jardiinooyin, yard isboortiga, goobaha warshadaha, guryaha, waddooyinka iyo dhacdooyinka gacanta ku badnaa.
texeen iyo Features: furitaanka Lebis, dusha flat, jare fudud iyo isticmaalka wax ku ool ah. Easy oo dabacsan loogu rakibo iyo xira. Dhaqanka Chain-Link dayrka waa doorashada ugu fiican ee a smart, amaan, dayrarka xuduudda ee warshadaha. Waxaan soo saari dayrarka silsilad link warshadaha leh kulul-rusheeyey galvanized, PVC dahaarka leh iyo fiilooyin ahama. The ugu caansan waa galvanized bowd silsilad link, taas oo uu leeyahay iska caabin wanaagsan in biyaha iyo daxalka atmosfeerta. Si kastaba ha ahaatee, PVC dahaarka cimri dherer silsilad link waa ka wanaagsan yahay xayndaabka galvanized.
Chain bowd LinkNoocyada Edge
Waxaa jira saddex nooc oo qarkiisa inaad doorato: kalagooys - kalagooys, maroojin - maroojin ama kalagooys - maroojin. Chain link bowd la maroojin badanaa ku dari doonaa ammaanka.
Knuckling - Waxa loo adeegsaday in lagu qeexo nooca selvage helay waaxyihiisu lammaane ku xiga ee xarigga darafyadiisa ka dibna laabaya silig dhamaado dib ugu loop a xidhan. Sida caadiga ah kalagooys caadiga ah waa haddii aan si kale loo sheegin.
Oo Dadbi - Waxa loo adeegsaday in lagu qeexo nooca selvage helay maroojin lammaane ku xiga ee xarigga darafyadiisa wada galool xidhan ee 1-1 / 2 markooda mashiinka, taas oo u dhiganta saddex qalloocinaya buuxa, iyo cuffing silig dhamaadaa af badan a xagal si ay u bixiyaan dhibcood af badan. Xarkaha dhamaado ka baxsan maroojin waxay noqon doontaa ugu yaraan 1/4 inch (6.4mm) dheer.
Chain sooc bowd Link:
sooc bowd Link silsilad: Wire 1.2mm dhexroor - 5.0mm,
mesh 20mm size -100mm
0.5m width Roll, 1.0m, 1.25, 1.5, 1.8m, 2.0m, 2.5 milyan
oo dhererkiisu Roll 10m-50m .
Waa kuwee xayndaabka waa in aan soo iibsan, galvanized ama PVC dahaarka leh silsilad-link dayrka?
Haddii aad rabto in aad bowd silsilad link istaagay 30-40 sano, markaa waa in aad ka iibsan kaliya xayndaabka ballaciisu silig of 3mm a - 4mm. Haddii aad rabto in aad leedahay muuqaal soo jiidasho waa iibsadaan bowd PVC dahaarka leh. Just u baahan tahay ilaalinta ka dhanka ah daxalka, waxaad dooran kartaa bowd la galvanized. Haddii aad qorshaynayso in ay ku riday xayndaabka galay jawi colaadeed, oo u dhow badda ama aagga warshad acid. Fadlan iibsan PVC dahaarka link silsilad xayndaabka. Sababtoo ah hawada cusbo badda iyo jawi acid si dhakhso ah Burburiyaan dusha zinc, laakiin ma ay ula qabsan kartaa daahan polymer ah.
Next: Aluminum Screen Window
Korontada Chain galvanized bowd Link
Hot Laydhka Chain galvanized bowd Link
PCV Chain dahaarka bowd Link